घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू जमैल लास्केल्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जसले मात्र नामद्वारा जान्छ "स्टार केटा"। हाम्रो जमैल Lascelles बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने समयको उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउँछ। विश्लेषणमा उहाँका बारेमा प्रसिद्धि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सम्बन्ध जीवन, र धेरै अन्य बन्द-पिच तथ्याङ्कहरू (सानो चिन्ता) भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैलाई थाहा छ कि उनीहरूले प्रीमियर लीगमा सबैभन्दा सानो कप्तान नियुक्त गर्ने रेकर्ड राख्दछन्। तथापि, केवल केहि केहि जमैल Lascelles 'जैव जो एकदम दिलचस्प छ। अब अनावश्यक बिना, सुरु गरौं।
जमैल Lascelles बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
जमैल लास्सेलस नोभेम्बर 11 को 1993th मा आफ्नो आमा, जिल लास्केलस र बुबा, टिम लास्सेलस (एक पूर्व ब्रिटिश बास्केटबल लीग दिग्गज) अंग्रेजी शहर डर्बीमा यूनाइटेड किंगडममा। तल जामल Lascelles 'प्यारा आमाबाबु को एक तस्वीर हो।
आफ्नो आमाबाबु माथि हेर्दै, एक सुझाव दिइयो कि जामल लेस्सेल्ससँग उनको पिताको उपस्थितिको कारण अफ्रिकी जराहरू छन्। जामल चित्रण पछि आफ्नो भाइ रिमा संग खुसी हुनुहुन्थ्यो जुन केटाकेटी साना थिए (तल चित्रित) जब आफ्नो विवाह गर्ने मायालु आमाबाबुको नेतृत्वमा।
फुटबल-मायालु घरहरूमा फैलिएको प्रायः फुटबलरहरूको विपरीत, जामल लेस्सेलस 'मामला फरक थियो। उनको पिता, एक ब्रिटिश बास्केटबल किंवदंती को लागि एक बास्केटबल प्यार मायालु घर मा उनको र रमा (उनको भाइ) बढ्यो।
आदर्श रूप मा, ईमानदारी र ड्राइव बचपन देखि Lascelles मेकअप अप को भाग हो। जब जामल लेस्सेलस एक सानो बच्चा थियो, उनले सधैं सबै खेलहरु (फुटबल र बास्केटबल समावेशी) को अतिरिक्त थियो।
जमैल Lascelles बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -क्यारियर बिल्डअप
जमैल लास्केलसका पहिलो खेलकुद सफलताहरू उनको खुट्टामा बट्टाको हातमा आए। आदर्श रूपमा, उनले आफ्नो बुबाको पाइला पछ्याउने खेलमा बास्केटबाट बढेको थियो। केही समय पछि उनी फुटबलमा फर्किनन्। उहाँले एक पटक भन्नुभयो भने;
चार या पाँच वर्ष देखि, मेरो बुबाले मेरो हातमा बास्केटबल राख्थे, र हामी जान्छौ र उसलाई हरेक दिन खेल्नु र तालिम दिन चाहन्छु।
जम्मा निरन्तर ...
"उहाँले हामीलाई नर्सरीबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ र हामीलाई तल लैजान्छ, र म र मेरो भाइ त्यहाँ बस्न र उसलाई खेल हेर्न चाहन्छु। यो उमेर पुग्यो जहाँ मलाई निर्णय गर्न पक्का थियो कि म फुटबल वा बास्केटबल खेल्न चाहन्छु। "
केही आमाबाबुको विपरीत हुनेछ, जमैलका आमाबाबुले बास्केटबलको सट्टा फुटबलको लाशमा झुकाएर आफ्नो निर्णयलाई समर्थन गर्न प्रमुख थिए। फुटबल खेल्ने जामलको निर्णयले गर्दा बास्केटबल को जितना ठूलो थिएन त्यो फुटबल को लागी फुटबल को रूप मा इंग्लैंड मा छ। आफ्नो दिमाग बनाउन पछि, तिनका आमाबाबुले उनीहरूलाई नयाँ भेट्टाउन क्यारियरको साथ कसरी अगाडि बढ्न आवश्यक सहयोग दिए। तिनीहरूले उहाँलाई नटिंगम वन युवा प्रणालीमा लैजान जहाँ जामल सफल परीक्षण थियो।
जमैल लेस्सेलस जुनसुकै फुटबलको लागि उनी नटंघम वनको रोस्टरमा भर्ती भएका युवा युवती टोलीमा प्रवेश गरेका थिए जसले उनलाई आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने चरण दिए।
जमैल Lascelles बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रसिद्धिको कारण
जमघट नटंघम वन युनियन सेटअपमा सामेल हुन पछि शुरुआती प्रतिज्ञा देखाइएको थियो। बच्चाको रूपमा, उनी सबै भन्दा प्रतिभाशाली वा सबैभन्दा पिच खेलाडी थिएन, त्यसैले लास्केल्सले कडा मेहनत गरे। जामलले यसलाई राख्छ NUFC साक्षात्कार;
केही खेलाडीहरू, यदि तिनीहरूले राम्रो गर्दै छन् भने, उनीहरूका खुट्टा ग्यासबाट लिनेछन्, तर मेरो लागि पनि कठिन काम गर्ने कारण पनि हो। त्यो म कसरी छु।
2011 को उमेर मा वर्ष 18 मा, जमैल लास्सेल को नटंघम वन को पहिलो टीम को लागि प्रोत्साहित गरिएको थियो। उनको वरिष्ठ क्यारियरको सुरुवातपछि तीन वर्षपछि, एक्सएनमक्स-वर्ष-उमेर लास्केलहरू आफूलाई आफूलाई उच्च मूल्याङ्कनशील युवा रक्षकहरूको रूपमा स्थापित गर्न गएका थिए।
उनी बेलायतको इंग्ल्याण्डको सफल परीक्षण हुँदा उनको सुधार पनि प्रकट भएको थियो। इङ्गल्याण्डका लागि 21 वर्ष अन्तर्गत, लेस्सेलले न्यूनकैलको रुचिलाई आकर्षित गरे जुन तिनलाई 2014 मा अधिग्रहण गर्यो।
हरेक अवसरमा उहाँले न्यूकैसलमा भेट्नुभयो, जाम्पले आफ्नो सबैभन्दा राम्रो मा दिए। उनको युद्ध र भूखमा सफल भएको जस्तो उनको कमान्डर प्रदर्शनले देश बनाएको छ र नोटिस लिन्छ।4अगस्ट 2016 मा उनको कडा कार्य इनाम दिइएको थियो, त्यो दिन द्वारा चुनेको दिन बेनेटेज नयाँ न्यूजल यूनाइटेड युनिट टीम कप्तान बन्न सफल भयो फैब्रिकियो कोलोनी।
टिल डेट, जामल लेस्सेलस प्रसिद्धि संग सम्भावना गर्ने क्षमताले 6-yard बक्समा बलपूर्वक ह्यान्डल गर्ने तरिकाको आधा अनुपातमा आनुपातिक हुन्छ। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
जमैल Lascelles बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
हरेक महान मानिसको पछि, एक ठूलो महिला छ, वा यसो भन्दै जान्छ। एक सफल लास्केल्स पछि, त्यहाँ ग्यामरोर वाग छ जस्तो देखिन्छ जुन हप्स राय को तल देखाइएको छ।
प्रायः नयाँ क्यासल फ्यानहरूले जामल लेस्सेल्स प्रेमी प्रेमी, हर्प्स रेलाई वर्णन गरेका छन् किम Kardashian.
जमैल Lascelles बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
जहाँसम्म उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि सम्बन्धी छ, जामलले आफ्नो बुबा टिमका लागि उच्च स्तरको स्थितिलाई धन्यवाद दिए जसले आफ्नो बास्केटबल क्यारियरबाट धेरै पैसा कमाए।
जम्मा Lascelles कुल प्यार र सम्मान को एक घर मा उठाएको थियो। लगभग 20 वर्षको विवाह को लागी उहाँ सँगै आमाबाबु सँगै बस्नुभयो (हेर्नुहोस् विवाहको फोटो तल) आफ्नो बच्चाहरु र प्रियजनहरूलाई राम्रो उदाहरण देखाइएको छ।
यो फुटबलकर्ता जस्तै दुखाइको दुखाइ जर्जिन्हो, एलेक्सिस सं्यान्ज र मेम्फिस डेप्ले 8 क्रस गर्नुभन्दा पहिले उनीहरूका आमाबाबुहरू सँगै भेटिनन्। Lascelles को लागी, उनको पिताले धेरै मेहनत गरे र मेरी आमा अविश्वसनीय रूपमा उहाँलाई समर्पित भएको छ। आदर्श रूप मा, जमैल को एक परिवार को रूप मा तल दी तस्वीर मा देखेको धेरै खुश छ।
Lascelles परिवारको लागि सफलता कुनै दुर्घटना छैन। यो कडा काम, दृढता, सिक्न, अध्ययन, बलिदान र सबै भन्दा धेरै, एकताबद्धताको रूपमा तल फोटोमा देखाइएको छ।
Lascelles 'Mum को बारे मा: जब यो नजिकता आउँछ, जामलको मासुले आफ्नो बुबा र तिनका बहिनीहरूको विपरीत माथिल्लो हात लिन्छ। तपाईंलाई थाँहा थियो?? ... जमैलको पहिलो फोन कल गरेपछि उनले आफ्नो नयाँ क्यालेन्डर कप्तानको खिताबलाई आफ्नो शिरमा राखेका थिए।
Lascelles आफ्नो आमा, जो आफ्नो खेल को नियमित दर्शक र उनको कुत्तों को एक ठूलो प्यार को भूमिका को स्वीकार गर्दछ। जिलले एक पटक ट्वीट गरे जुन 1,000 भन्दा बढी ट्र्याकमा ट्रान्सफर गरिएको थियो भन्ने थाहा पाएकी थिइन् कि उनी उनको ग्याजेट दिनको पछाडी उनको लक्ष्य £ £5लाई उनको गोल गरे।
भाइहरू: रिमा लास्केल्स जामल लेस्सेल्सको भाइ हो। रामा, जमैकाको विपरीत, बास्केटबल संग चिपकाएर आफ्नो बुबाको पाइला पछ्याउँदै।
लेखनको समयमा, रिमा हवाई प्रशासनिक विश्वविद्यालयमा हनुोलुulu, संयुक्त राज्यमा स्थित एक निजी विश्वविद्यालयमा पुरुष बास्केटबलको लागि खेल्छ। उनले इंग्लैंडको डर्बीमा डर्बी कलेजबाट स्नातक गरे, जहाँ उनले ग्रेट ब्रिटेन यूक्सएनमक्सक्सको लागि बास्केटबल खेलेका थिए जहाँ उनले EBL D20 ट्रफी जिते।
Jalen Lascelles: जलान जामल लेस्सेलस सबै भन्दा सानो भाइ हो। उहाँ 11 वर्षको उमेरमा लेख्दै हुनुहुन्छ।
जलान न्टटिंघम वन युवा युवा क्लबका लागि खेल्छ। शुरुमा, उनी जमैलको भाइको पछाडि पछ्याउन चुनेको छन किनभने उनको सपना न्यूकैसल युनाइटेडको लागि खेलिन्छ। जलान धेरै राम्रो प्रशिक्षित छ। उहाँ आरक्षित छ र घरको काममा प्रेम गर्नुहुन्छ।
जमैल Lascelles बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -आक्रमण
23 अप्रिल 2014 मा, जामल Lascelles 'नाम सबै एक पल्ट आक्रमण को केन्द्र मा भएको कारण समाचार थियो।
जमैल एक डर्बी नाइटस्पट मा अत्याधिक आक्रमण को आरोप लगाएको थियो, यसले उनको गिरफ्तारी र अदालत को आरोप लगाइएको थियो।
औपचारिक अनुरोध शुल्क को लागी लेस्सेल को जमानत गरे। न्यायाधीश जोनाथन गोस्लिङले सीसीटीवी प्रमाणको विश्लेषण पछि Lascelles सशर्त जमानत दिए। यो सीसीटीवी मार्फत स्पष्ट थियो कि जामल पीडित द्वारा चोट लगाउने चोटहरूको लागि जिम्मेवार थिएन।
जस्तै फरवरी 23 को 2015rd, उनको मामला खाली भयो। त्यस पछि, Lascelles ट्विटर मा भन्यो;
"गलत आरोप लगाउने र आक्रमणको आरोप लगाएपछि, अब खुसीसाथ यसो भन्न सकिन्छ कि सबै शुल्कहरू हराएका छन् र मेरो नाम सफा गरिएको छ।"
जमैल Lascelles बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -डेमसँग लड्नुहोस्
अक्टोबर 2017 मा, जमैल Lascelles सँग टोली मैदान संग प्रशिक्षण मैदान लडाई थियो Mohamed Diame।
दुई खेलाडिहरूले आफ्ना गल्तीहरूको शर्मिला महसुस गर्थे र साथी साथीहरू, क्लब व्यवस्थापन र प्रशंसकहरूलाई माफी माग्न छिटो थिए। श्रृङ्खला गर्न, तिनीहरूले लखेटको लागि सम्पूर्ण पहिलो-टोलीको टोली र स्टाफ बाहिर लैजान थाले।
जमैल Lascelles बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -एक कप्तान हुनुको बारेमा
जमैल लास्केलस द्वारा स्लिपर बनाइयो Rafa Benitez किनभने उनको प्राकृतिक नेतृत्व कौशलको कारण। यो उहाँका कंधेहरूमा कप्तान ब्यान्डब्यान्डको बारेमा भन्न चाहन्छ।
"मैले चिन्ता गरें, टोपी गरिरहेको छु, म त्यस्ता कुरामा छुट्याउन सकिनँ, कतिजना खेलाडीहरूसित छु, के मैले खेलाडीहरूलाई रमाउन सक्दिन र अरूलाई पनि गर्न सक्दिन, के तपाईंलाई थाहा छ? खेलाडीहरू पत्ता लगाउन खोज्दै। म सोचिरहेँ कि त्यो राम्रो लाग्यो, र म तिनीहरूका लागि मलाई हेरिरहेछु, म प्रशिक्षकमा छु र यस ठाउँको वरिपरि छु। "
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो जमैल Lascelles बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.
Adebayo Akinfenwa बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य